वैज्ञानिकहरुकाे चेतावनीः श्वास लिदा र कुराकानी गर्दा पनि कोरोना फैलिन्छ
काठमाडाैं । कोरोनाभाइरसबाट बच्नका लागि समाजिक दुरी एक मात्र उपाय देखिएको छ । भाइरसको संक्रमण फैलने विषयलाई लिएर वैज्ञानिकहरुले लगातार नयाँ चेतावनी जारी गरेका छन् । अमेरिकी वैज्ञानिकको एक प्यानलले कोर...
कोलम्बो । कारागारमा रहेका झण्डै तीन हजार जनालाई श्रीलंका सरकारले रिहा गरिदिएको छ । अत्यधिक भिड रहेका र कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने खतरा देखेर उनीहरुलाई रिहा गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । कोरोन...
भारतभर आज राति ९ बजे मैनबत्ती बाल्न प्रधानमन्त्री मोदीको अपील
नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार राति सबै भारतीयहरुलाई मैनबत्ती जलाउन अपील गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले एक टविट मार्फत बिजुलीको बत्ति निभाउँदै मैनबत्ती, मोबाइलको बत्ति, दियो बाल्न अप...
ट्रम्पको चेतावनी- अर्को हप्ता हाम्रा लागि निकै चुनौती छ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोनाभाइरसका बारेमा पर्याप्त सचेतता नअपनाउने हो भने आउँदो दुई हप्ता अझै धेरै मानिसको मृत्यु हुन सक्ने बताउनुभएको छ। अमेरिकामा कोरोनाभाइरस संक्रमित व्यक्तिको संख्या नै बढी ...
१०४ वर्षीय वृद्धिले कोरोनाभाइरसलाई हराए
काठमाडाैं । कोरोनाभाइरस जस्तो खतरनाक बिमारीलाई एक १०४ वर्षीय वृद्धिले हराएका छन् । दोस्रो विश्व युद्धमा समेत भाग लिएका १०४ वर्षीय विलियम बिल लेपचिसले कोरोनाभाइरस जस्तो महामारीलाई पनि हराएका छन् । ...
कतै जुत्ताबाट त भित्रिएको छैन् तपाईको घरमा कोरोना भाइरस ?
काठमाडौँ । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका २०६ देशमा फैलिएको छ। अहिलेसम्म १२ लाख बढी कोरोना संक्रमण बनेका छन् भने साढे ६४ हजार बढीको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसका संक्रमित...
के मास्कलाई धोएर वा प्रेस गरेर पुनः प्रयोग गरिन्छ ?
काठमाडौँ । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका २०६ देशमा फैलिएको छ। अहिलेसम्म १२ लाख बढी कोरोना संक्रमण बनेका छन् भने साढे ६४ हजार बढीको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणब...
चीनले दियो अमेरिकालाई १ हजार भेन्टिलेटर, न्युयोर्कका गभर्नरले दिए चीनलाई धन्यवाद
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) बाट चीन कठीन अवस्थामा पुग्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 'चाइनीज भाइरस' भन्दै लामो समयसम्म चीनको अपमान गरिरहे। अहिले चीन यो भाइरसको महामारीबाट तंग्रिइसकेको छ...
कोरोना भाइरसबाट न्यूयोर्कमा मात्रै ३,५०० को मृत्यु
अमेरिकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या लगातार बढेर तीन लाख नाघेको कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी सङ्क्रमणको आँकडा राख्दै आएको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ। त्यसमध्ये एक तिहाइ न्यूयोर्क राज्यमा मात्र छन्। जुन इटलीको हार...
१ लाख १९ हजार कोरोना संक्रमित भएको स्पेनमा कसरी बच्यो यो शहर ? सिक्नैपर्ने पाठ
काठमाडौँ । स्पेनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ११ हजार नाघेको छ भने एक लाख बढी संक्रमित बनेका छन्। स्पेनमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेका बेला यहाँको एउटा शहरमा भने अहिलेसम्म कुनै संक्र...